प्रणय दिवसमा प्रियलाई पत्र - ढोरपाटन पोष्ट
प्रणय दिवसमा प्रियलाई पत्र
२०७७ माघ २६, सोमबार १३:०४
आज फेव्रअरी ८ तारिख रहेछ । यस दिनलाई प्रेम दिवसका रुपमा मान्ने, मनाईने प्रचलन चलाइएको तिमीलाई पनि थाहा छ । संसारका सबै प्रेम जोडीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दिन भन्ने पनि गरिन्छ । प्रेमी÷पे्रमिकाबीचको स्वतन्त्र, स्वच्छन्द र रोमान्टिक, प्रेममय दिनका रुपमा खास दिन भनेर भन्ने गरिएको रहेछ । सायद् तिम्रो मान्छेले सही अर्थमा प्रेमलाई बुझको छ र तिमीपनि तिम्रो मान्छे बुझ्छ्यौ भने, आज आरम गर, भोलि विहानै मलाई भनिदेऊ, प्रेम के ? तिम्रो र मेरो जस्तो अरुको देख्यौं ? फेव्रअरी १४ अरुलाई बुझाईदेउ, मलाई वास्तविक प्रेम बुझाईदेऊ ।
उसो त प्रेम र यसको अर्थ के हो ? भन्दा, बोल्दा, लेख्दा र व्यवहारमा गरिएका प्रेममय जीवनहरु सबैले यसलाई बुझेका होलान ? कसैले भनेका रहेछन् ‘प्रेम अक्सीजन हो ।’ कोही लेख्दा रहेछन्, ‘प्रेममा सीमितता छैन रत यो, एउटा बाँच्ने आधारशिला हो ।’ कोही बोल्दा रहेछन्, ‘प्रेम दुई मुटुको धड्कन हो ।’ तर व्यवहारमा प्रेम जीवनको संगम पनि हो । तर्क वितर्क यसैमा होला तर खासमा प्रेम के होला ?
तिमी मलाई बताइदेउ ! के म तिम्रो घाँटिमा कहिल्यै अड्किएको हुन्छु ? के तिमीलाई मैले सिमित चौघेरामा बन्धक बनाएर साँचेको छु ? वा मैले मेरो मुटु अठ्याएर तिमीलाई दर्द दिएँ ? होईन भने, दिवस सधै मनाउन सकिन्छ । रातो गुलाव मनभरी फुलेको छ । जति चाह्यो टिपेर आदान प्रदान गर्न सकिन्छ, किन ? किन तिम्लाई फ्रेवअरी १४ नै चाहियो प्रिय, किन ?
जीवनमा आफूलाई प्रेम गर्नेहरु र आफूले प्रेम गरिनेहरुका कथा यो दिवसले बोल्नु पर्दछ । खै कस्लाई बोल्यो बोलेन, १५ फ्रेवअरीपछि पनि त हेरौंला । प्रेमको अर्थ एक अर्कालाई माया गर्ने दुई विपरित लिङ्घी वीचको सम्बन्ध भनेर मात्र बुझ्न थालियो भने, व्यवहारमा फेल खाएकाहरुलाई संझनु । सत्य प्रेम त परिवारसंग होस् । साथीभाईसँग होस् । मित्रहरुसँग प्रगाड बनोस् । समाजसँग उच्च रहेस् । अव पनि युवायुवतीको विशेष आकर्षणका रुपमा प्रेम दिवसलाई मान्ने, सुन्ने र भन्ने प्रचनबाट समाज टाढै बसोस् । सधै र सबै प्रेमपारखी जीवनहरुलाई शुभकामना । के यत्ति भनेर तिम्लाई आजको दिन संझे पुग्दैन र ?
प्रेम दिवस, यसलाई प्रणय दिवस अर्थात हामीले त आजकल भ्यालेन्टाइन—डे भनेर जान्दा रहेछौं । मेरो बाबाले १४ फेव्रअरी थाहै नपाई मेरी आमालाई मायाँ दिनुभएकै त रहेछ । यसको इतिहास अध्ययनले बताए जस्तो, इस्वी संवत २६९ बाट इटालीको रोममा एक जना रोमका सम्राट्ले नारीसँगको सम्बन्ध अर्थात दुई प्रेमजोडिहरुको सद्भाव रोकावटको कथा उहँहरुलाई पत्तै थिएन । सायद आज पनि छ छैन मैले सोधेको छैन । उनीहरुको प्रेम र विवाहमा रोक लगाउने आदेश र उक्त आदेशलाई एक जना भ्यालेन्टाइन नामका व्यक्तिले उल्लङ्घन गरेको कथा आज तिमी र मलाई पढेर थाहा भयो । प्रेम त यो कथा नप्ढदैबाट सुरु गरेका होईनौं र ?
तिनै उल्लंघन कर्ता अर्थात प्रेमी प्रेमिकालाई मृत्युदण्डसम्म दिइको आजको दिन, मैले तिम्लाई र तिम्ले मलाई जावो गुलावको फूल दिन पाएनौं भनेर दाधारमा नपर हुन्न र ? अव यसदिनलाई प्रेम दिवस भनौं वा के भनौं । मृत्युदण्ड दिइएको दिन र मरेका प्रेमीहरुको संझनामा प्रेमदिवस मनाईरहँदा आज हातहातमा थमाइएका, थमाउन खोजिएका गुवालका फूलहरुले हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ वा ति मृत्युदण्ड पाएका दुई जोडिलाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली चढाएको चलन कायम गर्दछ । आजकल हाम्रो संस्कारमा श्रद्धाञ्जलीमा पनि रातो फूल चढ्न थालेको हो त ? होईन भने, यही दिनमा प्रेम प्रस्ताव, गुलावको फूलले स्वागत, सम्बन्धमा वर्णन, युवायुवतिमा तरंग, दुई लोग्नेस्वास्नीबीच प्रणयलीला अर्थ जानेर नजालेर आजको दिनको उपयोग आफ्नै ढंगले भइरहेको पाइन्छ । प्रिय म जिउँदै छु, तिम्लाई कसरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने मन जाग्यो ? सोध्नसम्म नसक्ने मेरो मन फोरेर प्रश्न गर्दैछु ।
१४ फ्रेबुरअरीलाई बुझ्दा दुई ढंगले बुझ्न जरुरी देखिन्छ । पहिलो प्रेम जोडिको हत्या भएको दिनको स्मरण, दोस्रो प्रेमको सार्थक अभ्यास र व्यवहारमा जीवनको रहस्य । आजको जस्तो युवायुवतीमा एक प्रकारको विकराल रुप, जर्बजस्ती प्रेम गर्नेको होड, त्यसमा बदला, झगडा, एकखालको कुलत, विभिन्न अनैतिक क्रियाकलाप, क्षणिक आनन्द, मोज, मोस्ती यो प्रेमलाप त होला तर लाभका हिसावले होईन । के तिमी र म लाभका त्यस्ता घीनलाग्दा पात्र हौं र ? स्वार्थ साटेर समाजलाई सिकाउनु के छ ? सद्भावना बाँड्न जानेनौं, अव दुनियाँलाई रमिता बाँडेर व्याज खाने नै हो त प्रिय, होईन भने, प्रणय दिवस पश्चिमी संस्कृति हो । यो संस्कृतिको केही राम्रो पक्ष भएता पनि अहिलेका आधुनिक युवापुस्तामा एकदमै विकृति फैलाएको पाउँछौं । त्यसको सिकार बन्नुपनि छैन । आखिर माया गर्नेहरुका लागि सधै प्रेम दिवस नै भइरहन्छ त प्रिय, अरुवेला कोपराकोपर गर्नेहरु आजको दिनमा लीला लेखाउन समाजिक सञ्जाल तरंगित बनाएको तिमीलाई प्रेम जस्तो लाग्यो, भ्रमको प्रेम न तिमी गर न मलाई गर्नुछ ।
भ्यालेन्टाइन—डेमा सबैभन्दा धेरै रातो रङको गुलाफ आदानप्रदान गरेको पाईन्छ । यसलाई प्रेम–प्रस्तावका रूपमा प्रदान गर्ने प्रचलन छ । फूल स्वीकार गर्नु प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरेको कुराको प्रतीक हो । तर सबै फूल स्वीकार गरेकाहरुको प्रेम जीवन्त भने हुँदैन होला नी ? रातो रङको गुलाफ मित्रता र मुटुको धड्कनको प्रतीक मानिन्छ । तिम्रा मेरा मनमा ढकमकाएका गुवावहरु यत्तिकै लठ्ठिएका छन् । प्रेम विभोर भएर लजाएका छन् । लहलह झ्लेका थुँगाहरु, जुरुक्क उठेका पालुवा मूनाहरु जीवन तरंगीत पार्नेगरि रंग भरिदिएका छन् । भविश्यका जीवन्त यात्रामा सत्यमनबाट चुरमुर्रिएका आकाँक्षाहरु भित्रभित्र मौलाएका छन् ।
यता हेर त, तिम्रो अनुहार भरी लालयित बनेर फर्केको कति राम्रो पहेँलो गुलाफ, यसलाइ मित्रताको प्रतीक मानिन्छ । फ्रेण्डसीप डे अर्थात मित्रता दिवसका दिन तिम्रो रुप हेरेर बाँच्नेगरेको मै त्यस्तो पात्र आज पनि त तिम्रो स्वच्छन्दता र निखारतामा सम्मानपूर्वक स्नेश बाँडेर बाँचेको छ् । सफा र कन्चन अनुहार टाढैबाट तस्वीरमा हेरेर दुनियाँ सामु चुपचाप नतमस्तक हुने मेरो मन प्रति प्रश्न किन्चत नगर्नु । सेतो गुलाफ साँचो प्रेम र स्वच्छ हृदयले प्रतित जसरी संसारभर मानिन्छ, हाम्रो प्रेम त्यसको एक प्रतित बन्न सकोस् ।
जहाँ भावुकताले भरिएको सन्देश दिनमा सेतो गुलाफले महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कालो गुलाफ बिदाइको प्रतीक मानिन्छ । समयले टाढा बनायो भनेर मन मस्तिष्क साँघुरो नबनाईदिनु । यदि कुनै कारणवश प्रेम सम्बन्ध जारी राख्न सम्भव छैन भने कालो गुलाफ दिएमा बरु सेतै संझेर स्वीकार गर्ने क्षमता मैले विकास गर्नुपरे तयार हुनेछु । १४ प्रेवअरीमा प्रदान गरिएको कत्तिको रातो गुलाव कालन्तरमा कालोमा परिणत भएका पनि छन् । तर जसरी यसलाई आजको दिनमा बुझिएको छ, त्यसरी नै भोलीका दिनको निरन्तरतासँग जोडेर जाँदा पक्कैपनि जीवनका सही, साँचो र अर्थपूर्ण प्रेम, सतभाव, मायाँ, ममता, झ्काव वाँची रहने छ । म बचाउने र बाच्ने बगैचाको माली बनेर जिउँदो हुनसम्म बाँचिरहने छु ।
मलाई लाग्छ, प्रेम सत्य ढंगले गरिएको हो भने, मुटुमा विझाई राख्ने छ । त्यसको ढड्कन जीवित आत्मासम्म भड्किरहने छ । प्रेमको प्रगाडता देखाउनेहरुले यस दिनको प्रयोग गर्ने नै हो भने, रिस, आवेग र आक्रोस हामीबीचमा नकरात्मक गुणहरु हुन् । यिनको प्रभावले समेत अन्तरमन थकित र विचलित हुँदैन । एक अर्काप्रति जीवन चिहाएर बाँच्ने अमरमनहरु साँचै प्रिय छन भने, एकमन भएर छताछुल्ल भएका होईनन् । हाम्रा चिन्तनहरु सकरात्मक बनाएर जीवनको मोड स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । देखासिकी होईन, साँचो अर्थमा प्रेम झाँगिने लहरा बनेर प्रतित हुन सक्नुपर्दछ । एक अर्कामा सद्भाव, सही व्यवहार, जीवनको बुझाई, सजिला अफ्ठेराहरुमा एकाकार, स्वार्थको त्याग, प्रेमप्रति समर्पण, आत्मीयतामा बलिदान हामीबीचको सार्थक प्रेम र जीवन बन्न पुगोस् । विगत नराम्रो बनाइएको भए, वर्तमान र भविश्य स्वर्ण अक्षरले कोर्ने सार्थकता जीवित बन्न पुगोस् । जीवन हो, उतार चढाव सबैको हुन्छ । त्यसका कम्पनहरुले कहिलेकाही ह्ृदय कोरिदिन्छ । चिथोरिन्छ, दुखाउँछ तर सन्चो पार्ने क्षमता महान हुन्छ । बुझ्नेर बुझाउने सरल तरिका भनेको एक अर्काको सम्मान नै हो । अपमान बाँढ्ने र बढाउने मनोभावना मर्छ । गलत भावना निचोरिन्छ ।
प्रिय, मन अफ्ठेरोमा ढाडस्, सहजतामा उच्च मनोवल, सधै एकनासको सद्भाव, सम्मान दुवैपक्षका उत्तकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । सद्भाव एक अर्कामा बाँडौं । जिउने मर्ने मानिसको चोला हो । कस्ले कस्को हिसाब राखेको छ र ? केहीले राखेर जीवनको ओझ घटाउनु परयो ? तसर्थ सबैको मायाँ ममता, सद्भाव र सम्मानजनक व्यवहारले भरिपूर्ण आहा जीवन विताऔं । वाहा जीवन उद्घाटित गरौं ।
पत्रकार महासंघको आयोजनामा सञ्चालित निःशुल्क पत्रकारिता तालिम सम्पन्न